မြန်မာနိုင်ငံမှ ကွမ်းစားသူ ၁၀၀ ၌ ၃၄ ဦးနှုန်း ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနေ - Health - Myanmar Business Directory: Golden Place
Jun 13 2014 No Comments
ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းများတွင် ကွမ်းစား သုံးခြင်း၊ ဆေးလိပ် သောက် သုံးခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ကွမ်း တစ်မျိုးတည်း စားသုံးသူ ၁ဝဝ တွင် ၃၄ ဦးနှုန်းဖြင့် ခံတွင်းကင်ဆာ အများဆုံး ဖြစ်နေပြီး ဆေးလိပ်နှင့် ကွမ်း နှစ်မျိုးလုံးသုံးစွဲ သူ ၁ဝဝ တွင် ၂၂ ဦးနှုန်း၊ ဆေးလိပ်တစ်မျိုးတည်း သုံးစွဲသူ ၁ဝဝ တွင် ၁၉ ဦးနှုန်း ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးတို့၏ အန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပြီး ပြည်သူ့ဆေးရုံများ ၌လည်း ဆေးလိပ်နှင့် ကွမ်းယာ သုံးစွဲခြင်းကို ဖြတ်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
”ဆေးရုံတွေမှာတော့ ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟောပြောပွဲတွေ အမြဲတမ်းလုပ်ပါတယ်။ နယ်တွေမှာလည်း သွားလုပ်ဖြစ်ပါတယ်”ဟု အင်းစိန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး (ဆေးပညာ) ဒေါက်တာ ဒေါ်တင့်တင့်ကြည်က ပြောကြား သည်။ ဆေးလိပ်တွင် အဆိပ်သင့်စေသော ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် နီကိုတင်းအပြင် ဖော်မလင်ဆေးရည်၊ သန့်စင်ခန်းသုံးဆေး၊ ကြွက်သတ်ဆေး၊ လက်သည်းဆိုး သန့်စင်ဆေး၊ ကားမောင်းလျှင် ထွက်သော ဓာတ်ငွေ့၊ မီးခိုးငွေ့၊ ကတ္တရာဆေးချေး၊ အိမ်သုတ်ဆေး၊ ဓာတ်မြေသြဇာတွင် ပါဝင်သော ဓာတ်ပစ္စည်းတို့ ပါဝင်သဖြင့် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားစေ ကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။ ကွမ်းစားရာတွင် ပါဝင်သည့် ဆေးရွက်ကြီးကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ အဓိက ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုသည် အမျိုးသားများတွင် အဖြစ်များကြောင်း သိရသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် အမျိုးသား ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီး ၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီး တစ်မျိုးမျိုးကို သုံးစွဲ နေကြကြောင်း (WHO) ၌ ဖော်ပြ ထားသည်။
About Currency Exchange Rates and ATMs in Myanmar Jun 13 2014
Software မသုံးဘဲ Folder ကို Lock ချထားရအောင် Jun 13 2014
လာမဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း နှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ သက်မွန်မြင့် Jun 13 2014
Telenor Myanmar မှ Sim-Card Distribution အတွက် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များကိုဖိတ်ခေါ် Jun 13 2014
Huawei Authorised Service Center မြန်မာပြည်တွင် ပထမဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ် Jun 13 2014
Why Is Polyamory Therefore Typical in the LGBTQ+ Community? Jun 13 2014
The sex that is best Positions For ValentineвЂ™s Day Jun 13 2014
Mature Adult Hookup Dating software provides room for you yourself to talk, flirt with like-open people that are minded. Jun 13 2014
Nationwide Geographic, having said that, depends onamore strategy that is conventional Jun 13 2014
Compare: DBA vs LLC When Beginning A Company Jun 13 2014